Apple မူပိုင်ခွင့်အရောင် 3D ပရင်တာ | ငါက Mac ပါ
တက်ရောက်သူတော်တော်များများက Apple ဆိုတာမသိကြပါဘူး တစ်ချိန်ကပရင်တာများသာမကကွန်ပျူတာများနှင့် iPod များရောင်းချခဲ့သည်။ Cupertino ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီကရပ်တန့်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုဘေးဖယ်ထားခဲ့သည်။
ယခုအခါမူပိုင်ခွင့်ပေါ်လွင်လာသည်။ ထိုဖြစ်နိုင်ချေကို Apple ကနောင်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပရင်တာများထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အမှားမလုပ်မိဖို့သတိထားပါ။ Apple ကသာမာန်ပရင်တာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Mac ဘေးတွင်ရှိနိုင်သည်ကိုစဉ်းစားနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ 3D ပရင်တာတွေအကြောင်းစဉ်းစားနေကြတယ်.
ယခုအချိန်တွင်ဤ 3D Printer များထဲမှတစ်ခုသည်အတော်လေးစျေးကြီးပြီး၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်မှခေါ်ယူနိုင်သောအရာများမှတဖြည်းဖြည်းချင်းရှားပါးလာသည်။ ဤကဲ့သို့သောပုံနှိပ်စက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောသုံးစွဲသူများအကြားတွင် ပို၍ များပြားလာပြီး၊ ဤသည်ကစျေးကွက်တည်ငြိမ်ပြီးဖြစ်ပျက်လာနေပြီဖြစ်သောကြောင့်စျေးနှုန်းများကျသည်။ ထင်ရှားသည် Apple မှာမူပိုင်ခွင့်တစ်ခုသာရှိတယ်၊ သူတို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာထက်ပိုတယ် ပြီးတော့ 3D printer တစ်ခုကိုတွေ့နိုင်တယ်။
အိုကေယခု Apple သည် 3D ပရင်တာတွင်မူပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီ။ သို့သော်ဤပုံနှိပ်စက်အမျိုးအစားသည်စျေးကွက်ထဲတွင်ကြာမြင့်စွာရှိနေပြီးဖြစ်ပါကမည်သို့မှတ်ပုံတင်မည်နည်း။ အခြေခံအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်အရမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကပရင်တာကိုခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့သင်ပေးတယ် ဆိုးဆေးသို့မဟုတ်ဆေးသုတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး။ ဒီ 3D Color Printer သည်အိမ်မှ ထွက်၍ အိမ်မှထွက်ခွာသောပညာရှင်များအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဥပမာ - Apple ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ရှေ့ပြေးပုံစံအမြောက်အများကိုဖန်တီးသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည် အရောင်များ, အရွယ်အစားနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကဲ့သို့တူညီသောပုံဖော်.
ဒါတွေအားလုံးမှထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေမယ် ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့သူကစျေးကွက်ထဲကနေချက်ချင်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပြီး 3D printer တစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Apple သည်အရောင်သုံးရောင်စုံပရင်တာအတွက်မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်